uvavanyo lokuzenzekelayo kunye nezinto ezingalunganga
Eyona Oomatshini Abazihambelayo Uvavanyo lokuZenzekelayo kunye neZinto ezingeloncedo
Uvavanyo lokuZenzekelayo kunye neZinto ezingeloncedo
Uvavanyo oluzenzekelayo, xa lwenziwe ngokuchanekileyo lunokuba neenzuzo ezininzi kwaye lube luncedo kakhulu kwiprojekthi nakwintlangano. Kukho nangona kunjalo kukho imingxunya okanye izinto ezingalunganga zovavanyo oluzenzekelayo ekufuneka silwazile.
Uvavanyo lokuZenzekelayo lovavanyo
Zeziphi izibonelelo zovavanyo lokuZenzekelayo?
Uqinisekiso lwento eyaziwayo
Ukuhlolwa okuzenzekelayo yindlela enhle yokuqinisekisa ukuba isicelo sisasebenza ngokufanelekileyo emva kotshintsho olwenziwe kuyo.
Kungenzeka ukuba xa inqaku elitsha longezwa kwisicelo okanye i-bug ilungisiwe, ichaphazela ukusebenza kwesoftware esebenzayo, okt i-regression bug yaziswa.
Ngokusebenzisa iseti yoqwalaselo oluzenzekelayo lokujonga xa usetyenziso luhlaziyiwe, sinokuchonga naziphi na iibhugi ezintsha eziziswe ngenxa yotshintsho.
Ulwazi oluphambili apha kukuqhuba ukukhangela okuzenzekelayo rhoqo xa isicelo siphuculwe.
Akukho sidingo sokuqhuba iseti epheleleyo yeetshekhi ezizenzekelayo. Ipakethi yokunciphisa umsi ngokukhawuleza kufuneka yanele ukuthatha nayiphi na imiba ephambili.
Olunye uncedo olukhulu lokutshekishwa okuzenzekelayo kukuphendula ngokukhawuleza esikufumanayo xa isicelo sihlaziywa. Ngokufanelekileyo iqela lophuhliso kufuneka lilungise nakuphi na ukusilela kwangoko xa livela, ngaphambi kokudlulela kweminye imisebenzi.
Nceda qaphela ukuba le ngxelo ikhawulezayo inokufezekiswa kuphela ngovavanyo lweyunithi kunye novavanyo lwe-API. Ukuba sivavanya ukusebenza kwi-UI okanye kwinqanaba lenkqubo, iimvavanyo zinokuthatha ixesha elide ukuba zigqitywe.
Ukuphunyezwa ngokukhawuleza kweetsheki
Ukuhlolwa okuzenzekelayo kungathatha ixesha kwiskripthi. Nangona kunjalo, xa sibaphumeza ngokukhawuleza kwaye banokuhamba ngamanyathelo ahlukeneyo ngokukhawuleza okukhulu kunokomntu. Ke ngoko, bayanceda ngokubonelela ngengxelo ekhawulezileyo kwiqela lophuhliso.
Oku kuyinyani ngakumbi kwimeko yedatha eqhutywa yidatha.
Kukhulula ixesha labavavanyi
Ukusetyenziswa okugqwesileyo kweetshekhi iimvavanyo zokuhlengahlengiswa.
Ukuvavanya iimvavanyo ezizenzekelayo kuyasikhulula ixesha labavavanyi, ukuze bajonge ngakumbi kuvavanyo lokuvavanywa kweempawu ezintsha.
Ngomqondiso ofanayo, xa usenziwa ngokufanelekileyo, iitshekhi ezizenzekelayo zinokuqhuba ngokuzenzekelayo ubuncinci okanye kungabikho kweliso okanye ungenelelo lwencwadi.
Iqela lophuhliso linganegalelo
Ukutshekishwa okuzenzekelayo kuhlala kubhalwa ngolwimi olufanayo nesicelo esiphantsi kovavanyo. Ngesi sizathu, uxanduva lokubhala, ukugcina nokwenza iimvavanyo kuba luxanduva ekwabelwana ngalo.
Wonke umntu kwiqela lokuphuhlisa unokwenza igalelo, hayi abavavanyi kuphela.
Ukungancedi kovavanyo lokuzenzekelayo
Zeziphi izinto ezingalunganga zovavanyo lokuZenzekelayo?
Ingqondo engeyonyani esemgangathweni
Lumkela ukuvavanya iimvavanyo! Oku kubaluleke ngokukodwa ekuqinisekiseni ukusebenza kwinqanaba le-UI okanye kwiNkqubo.
Utshekisho oluzenzekelayo lujonga kuphela oko kucwangciselwe ukujonga.
Zonke iitshekhi ezizenzekelayo kwindawo yovavanyo zinokudlula ngovuyo, kodwa zinokubakho iimpazamo ezinkulu ezingafumanekiyo. Isizathu soku kukuba itshekhi ezenzekelayo ibingafakwanga khowudi “ukujonga” ezo ntsilelo.
Isisombululo: Qinisekisa ukuba uyila iimeko ezifanelekileyo zovavanyo ngaphambi kokuba uzenze ngokuzenzekelayo. Ukutshekishwa okuzenzekelayo kulungile kuphela njengoko uyilo lovavanyo. Gcwalisa iitshekhi ezizenzekelayo ngovavanyo olusebenzayo / lokuhlola.
Ukuhlolwa okuzenzekelayo kunokusilela ngenxa yezinto ezininzi. Ukuba iitshekhi ezizenzekelayo zihlala zisilela ngenxa yemicimbi ngaphandle kweebugs eziyinyani, zinokuphakamisa ii-alamu zobuxoki.
Umzekelo, iitshekhi ezizenzekelayo zinokuqhekeka ngenxa yotshintsho lwe-UI, inkonzo iphantsi okanye iingxaki kuthungelwano.
Le micimbi ayithanga ngqo kwisicelo esiphantsi kovavanyo kodwa inokuba nefuthe kwiziphumo zokutshekishwa okuzenzekelayo.
Isisombululo: Apho kunokwenzeka / kufanelekileyo, sebenzisa iziqu. Izitampu zoyisa imicimbi ngoqhagamshelo okanye utshintsho kwiinkqubo zeqela lesithathu. Ke ngoko, iitshekhi ezizenzekelayo ziya kuba nokuzimela nakuphi na ukusilela okwenzekileyo.
Uvavanyo oluzenzekelayo aluvavanyi
Ngelishwa, uninzi lwabantu luyaphazama 'Uvavanyo lokuZenzekelayo' ngoVavanyo.
Nje ukuba babe nezixhobo zokuzenzekelayo uvavanyo, bafuna 'ukuzenzekelayo zonke iimvavanyo'. Bafuna ukulahla bonke 'abavavanyi bezandla'.
Inyani yile yokuba kuvavanyo ngumsebenzi wokuhlola. Ukuvavanywa kufuna ulwazi lwedomeyini, ingqondo egxile ekuzimiseleni nasekufundeni usetyenziso.
Uvavanyo alwenzi nje iseti yamanyathelo okuchazwa kwangaphambili kunye nokuthelekisa iziphumo ezizezona zilindelekileyo. Lo ngumsebenzi wokutshekishwa okuzenzekelayo.
Ukuvavanya ngokufanelekileyo isicelo, ubukrelekrele bomntu buhlala budingeka.
Isisombululo: Qonda ukuba kunikezelo oluyimpumelelo lweprojekthi ufuna uvavanyo oluzenzekelayo nolwenziwayo.
Enye ayizukutshintsha enye; gqibezela iitshekhi ezizenzekelayo ngovavanyo olusebenzayo / lokuhlola.
Ixesha lokuGcina kunye nomzamo
Kuya kufuneka uyamkele into yokuba iimvavanyo ezizenzekelayo zifuna ukugcinwa. Njengoko isicelo siphantsi kovavanyo sikhula, kunjalo ke xa kujongwa ngokuzenzekelayo.
Ukuhlolwa okuzenzekelayo kuphila ixesha elifutshane. Ukuba iipakethe zokuhlengahlengiswa azigcini zihlaziyiwe, uqala ukubona zonke iintlobo zentsilelo.
Mhlawumbi ezinye iitsheki azisasebenzi. Okanye mhlawumbi iitshekhi ayisiyonyani yokwenziwa kokwenziwa okutsha.
Oku kusilela kungangcolisa iziphumo zovavanyo.
Ukuqala kovavanyo lokuzenzekelayo ayingomzamo omnye. Ukufumana okuninzi kokutshekisha okuzenzekelayo, kufuneka zigcinwe zihlaziyiwe kwaye kufanelekile. Oku, kufuna ixesha elininzi, umgudu kunye nezixhobo.
Isisombululo: Kuba into yolondolozo yinto eqhubekayo, yenza ixesha lokuyila isakhelo esifanelekileyo. Sebenzisa iimodyuli ezinokusetyenzwa kwakhona, hlula iimvavanyo kwisakhelo kwaye usebenzise imigaqo-nkqubo yoyilo elungileyo ukunciphisa iinzame zokugcina.
Xa ukusebenza kulungele ukuvavanywa, uninzi lwamaxesha kuyakhawuleza ukwenza itshekhi yesandla.
Ingxaki kukuba, ukukhangela ngokuzenzekelayo kunokuthatha ixesha elide kwiskripthi kuxhomekeke kubunzima bovavanyo. Ke ngoko, ukwenza itsheki ngesandla kunika ingxelo ekhawulezileyo kunokubhala, ukuqhuba kunye nokujonga iziphumo.
Kananjalo, ngokwe-UI kunye novavanyo lwenqanaba leNkqubo, ukukhangela ngokuzenzekelayo kunokuthatha ixesha elide ukugqiba kunye nokwenza ingxelo. Ke ngoko, ukuba kukho ibug yangempela, sinokuthi singazi de kube zonke iimvavanyo zigqityiwe.
Isisombululo: Zama ukuzenzekelayo iimvavanyo ecaleni kophuhliso ukuze xa uphuhliso lugqityiwe, ungaqhuba iimvavanyo ezizenzekelayo ngokuchasene nokusebenza okutsha.
Kwakhona hlula iitsheki ezenzekelayo kwiipakethe ezahlukeneyo.
Iphakethe yokunciphisa umsi kufuneka ikhawuleze kakhulu. Iimvavanyo kufuneka zijonge kuphela ukuba isicelo sinokuqalwa kwaye sifikeleleke.
Okulandelayo, unokuba nepakethe yokuhlengahlengisa esebenzayo ejonga ukusebenza okukhulu.
Enye ipakethe yokuhlengahlengiswa inokubandakanya zonke iimvavanyo zokuphela kunye novavanyo olunzulu. Olu hlolo lunokuqhutywa ubusuku bonke.
Umzekelo wokubaleka ebusuku yibrawuza enqamlezileyo. Ngokwesiqhelo oku kuthatha ixesha elide ukuqhuba kuzo zonke izikhangeli.
Azikho ezininzi iibugs ezifunyenweyo
Uninzi lweebugs lubonakala ngathi lufunyenwe 'ngengozi' okanye xa kusenziwa uvavanyo lokuhlola.
Kungenxa yokuba kwiseshoni nganye yokuvavanya, sinokuvavanya usetyenziso ngeendlela ezahlukeneyo.
Ukuhlolwa okuzenzekelayo kokujonga kwelinye icala, soloko ulandela indlela enikiweyo. Ngamanye amaxesha kuseti efanayo yedatha yovavanyo. Oku kunciphisa ithuba lokufumana iziphene kwisicelo.
Kwakhona inani lokuhlengahlengiswa kweebugs libonakala ngathi lisezantsi kuneempawu ezintsha.
Isisombululo: Zama ukwakha okungahleliwe kwimeko kunye nedatha. Ukuzama iindlela ezahlukeneyo ngedatha eyahlukeneyo ngalo lonke ixesha kunokubonisa imiba enokubakho.
Kule posi, sijonge ezinye zeenzuzo kunye nezinto ezingalunganga zovavanyo oluzenzekelayo. Xa sibandakanyeka kuvavanyo oluzenzekelayo, kuya kufuneka siqwalasele la manqaku angasentla ukuze sifumane ezona zibonelelo.
t mobile 5g vs verizon 5g
I-T-Mobile ine-Samsung kunye neapos zeGalaxy Tab S7 kunye neTab S7 + kunye ne-5G kuthengiswa nge- $ 300
Ngaphandle kwemigaqo yokuvalelwa yodwa i-AT & T izimisele ukugcina iivenkile zayo zivulekile
Uphengululo lweNkulumbuso yeNkulumbuso yeSamsung
Eyona meko iphambili ye-iPhone 12 Pro Max
I-Samsung Galaxy S5 kunye neapos; Imowudi yoGcino lwaMandla iyavavanywa
Iifayile ezi-5 zescreen esingenazingcingo kwisikrini se-iPhone yakho okanye i-iPad ngaphandle kweApple TV
I-HTC One M9 vs HTC One M8